सेक्समा चरमसुख प्राप्त गर्ने तरिका | सुदुरपश्चिम खबर
यौन सुख चरम अवस्थामा त्यतिबेला पुग्छ, जतिबेला पार्टनरहरुकाबीच शरीर एवं मस्तिष्कमा एक आपसमा एकाकार हुन्छन । एकको आनन्द अर्कोलाई आनन्द देओस र एकको सन्तुष्टि दोस्रोको चरम सन्तुष्टि बन्न सकोस । सेकस विशेषज्ञका सल्लाह छ कि यदि तपाईं सम्पर्कमा चरम सन्तुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ भने यी चार तरिकाको अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
यशमा आनन्द पाउनका लागि तपाईको पार्टनर मानसिक रुपमा तयार हुनु आवश्यक छ । जसका लागि सबैभन्दा पहिलो आफ्नो पार्टनरमा सेकसको इच्छा जगाउनु जरुरी हुन्छ ।
यौन क्रियाका आनन्द लिनका लागि दुवै पार्टनरका इन्द्रियहरु सेक्स मै केन्द्रीत हुन जरुरी छ । मस्तिष्क सँगसँगै शरीरका हरेक अंग उत्तेजनाअनुसार क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ र सेक्सको आनन्द महसुस गर्नुपर्छ । यसले से८क्स क्रियामा गति ल्याउँदछ, उ’त्ते’जना बढ्दै बढ्दैं चरमसुखमा पुग्दछ ।
जब तपाईको पार्टनर सहमति र समर्पण आवश्यक ठान्छ, त्यतिबेला उसका सामु आफूलाई पूर्ण रुपमा समर्पण गर्न सक्नुपर्दछ । यदि दुवै जना यौनक्रियालाई महत्व दिदैंन भने उनीहरुले चरमसुख प्राप्त गर्न सक्दैंनन् । यसका लागि यौ नक्रियाका बेला विस्तारै फरक फरक आसन रहेर सेकस क्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ । जब एक ड्राइभर हुन्छ, त्यतिबेला दोस्रो केवल दर्शक भएर उसमा समर्पित हुनु जरुरी हुन्छ ।
यौनक्रियाको समयमा यो जरुरी छ कि आफ्ना इच्छा, आकांक्षा र भावना तथा सुखको खुलेर आफ्नो साथीसँग बाड्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि एकले अर्कोलाई उसलाई कहिले रमाइलो र आनन्द लागिररहेको छ कहिले अप्ठ्यारो लागिरहेको छ । कतिबेला सेक्सको रफ्तार बढाउने इच्छा लागिरहेको छ दुवैलाई असिम आनन्द प्राप्त हुन्छ ।
कतिबेला र कतिपटक गर्ने ?
सेकस गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेकस गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा गर्दा बढि राम्रो हुन्छ । एकाविहानै गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्न सक्छ ।
एउटा मात्र होइन, धेरै किसिमका सोध र अनुसन्धानबाट तपाईंलाई स्वस्थ राख्न विहानको समय नै सेकसको लागि उपयुक्त रहेको पत्ता लागेको छ । सबैभन्दा उत्तम समय भनेको विहान साढे ७ बजे हो । स्टमडीको अध्ययन अनुसार यो समयमा शरिरमा सेकस हार्मोन्सको मात्रा बढि उत्पन्न हुने भएकोले विहानै ओछ्यानमा ७ बजेर ३० मिनेटमा सेकस गर्न सुरु गर्दा अति उत्तम हुन्छ । यतिमात्रै होइन विहानको सेकसले दुबैजनालाई दिनभरी थकान महसुस नहुने, दिमाग पनि तिक्ष्ण हुने र दिनभरी ताजा महसुस हुने गर्दछ । इटलीमा गरिएको अध्ययनबाट विहान साढे ७ बजे सेकस गर्दा उत्तेजना चाँडै हुन्छ ।
अमेरिकाको एक सोध वैज्ञानिक र सेक्स सलाहकार डा. डेबी हरबेनिकले एक अनुसन्धानको क्रममा सेकसको सबैभन्दा उत्तम समय विहान नै रहेको पत्ता लगाए । डा. डेबीका अनुसार विहानको समयमा सेकस गर्दा हाम्रो शरिरबाट निस्कने केमिकल्सबाट धेरै सन्तुष्टि मिल्छ । जसबाट खुसी मात्रै होइन स्वस्थ पनि भइन्छ । यसैगरी अमेरिकी अर्का सेकस सलाहकार जेन ग्रीनरका अनुसार विहानको समयमा सेकस गर्दा राम्रो व्यायाम पनि हुन्छ । सेकस एकप्रकारको व्यायाम पनि हो । उपयुक्त समयमा नियमित सेकस गरे पनि मोटोपन घट्ने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।
रातिमा सेकस किन नगर्ने ?
विहानमा सेक्स गर्ने तर रातीमा किन नगर्ने भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्छ । रातीमा खासगरी खाना खाएर बेडमा जाने र सुत्नेबेला सेक्स गर्छन् धेरैजसो जोडिले । तर, खाना खाएर सेकस गर्नु र खाना खाएर नुहाउनु भनेको रोग निम्ताउनु हो । त्यसैले रातीमा सेकस गनुभन्दा विहान मै गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । रातीको सेकसमा नयाँपन नहुने पनि बताउने गरिएको छ ।
३ देखि १३ मिनेटको समय पर्याप्त
घण्टौंसम्मको भन्दा ३ देखि १३ मिनेटको सम्बन्ध मै अधिकतम सन्तुष्टि मिल्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । अमेरिकास्थित पेन स्टेट युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरूले आफ्नो अनुसन्धानबाट उक्त कुरा पुष्टि गरेका हुन् । शोधकर्ता एरिक कोर्टीले भनेका छन्– ‘आजकलका स्त्री–पुरुष पूरै रात गरेर बिताउने कल्पना गर्छन् तर यो असम्भव कुरा हो ।’ उनको शोधमा सामेल स्त्री–पुरुषले आधा घण्टाभन्दा बढी नै समय सम्बन्ध गर्न चाहने गरेको पाइयो । तर यसले निराशा र असन्तुष्टि पैदा गर्ने शोधकर्ता कोर्टी बताउँछन् ।
शोधकर्ताहरूले सेकस थेरापी र अनुसन्धानमा छ जना विशेषज्ञलाई सामेल गराएका थिए । यस समूहमा मनोवैज्ञानिक डाक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, पारिवारिक मामिलासम्बन्धी विशेषज्ञहरू थिए । यीमध्ये अधिकांश शोधकर्ताले यौ नबाट सन्तोषजनक सुख लिनका लागि पर्याप्त अवधि ३ देखि १३ मिनेट र वाञ्छनीय अवधि ७ देखि १३ मिनेट हुने बताए । यी विशेषज्ञका अनुसार १ देखि २ मिनेटको समय सेकसका लागि धेरै कम र १० देखि ३० मिनेटको समय धेरै लामो हो ।सेकसका लागि उचित समयः जहिले पनि रातिको समयमा मात्रै सेकस गर्नु स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छ ।
बिहान उज्यालो हुनुभन्दा केही समयअगाडिदेखि बेलुका घाम नअस्ताउन्जेलसम्म सेक्स गर्नुहुँदैन । अझ बिहानको समय त स्वास्थ्यका दृष्टिले झनै हानिकारक हुने बताइएको छ । बेलुका खाना खाएको सरदर २ घण्टापछिको सेक्स सहितकारी हुन्छ । जो व्यक्ति राति १०–११ बजे खाना खान्छन्, उनीहरूले आधारातपछि मात्र सेक्सगर्नु राम्रो हुन्छ ।सुत्ने बेलामा दूध पिउनुहुँदैन ।
दुई घण्टाअघि नै पिइसक्नुपर्छ अनि मात्र सेक्सका लागि उचित हुन्छ । त्यस्तै मिन्स भएको समयमा पनि सेक्सलाई वर्जित मानिएको छ । यद्यपि त्यस बेला कन्डम लगाएर पनि सेक्स गर्नुहुँदैन । त्यस समयको सेक्स रोग निम्त्याउन सक्छ । यदि पार्टनरबीचमा क्रोध, चिन्ता, दुःख, अविश्वास छ र मानसिक समस्या छ भने सेगर्नु उचित हुँदैन । दुवै जना प्रसन्न भए मात्र सेक्स आनन्ददायक हुन्छ ।
रोमान्टिक कुराकानी गरेर दुवै जनामा सेक्स जागृत गराएपछिको सेक्सले आनन्द र सन्तुष्टि दिने हुनाले यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।frommandu
यति धेरै फाईदा हुन्छ टुसा उम्रेका गेडागुडीको झोल खाएमा